၂ဝ၃ဝ မှာ တစ်နိုင်ငံလုံး လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ရမယ်လို့ စွမ်းအင်အရာရှိ ပြောကြား
ရန်ကုန်အနောက်ပိုင်းခရိုင် မရမ်းကုန်းမြို့နယ် စိန်ပန်းမြိုင်ဓါတ်အားခွဲရုံက ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးပေးတဲ့ ထရန်စဖော်မာတွေကို မြင်ရစဉ်
Photo: YESC-CallCenter Facebook
ကမ္ဘာ့ဘဏ်နဲ့ မြန်မာအစိုးရတို့ ပူးပေါင်းပြီး လာမယ့် ၂၀၃၀ ခုနှစ်ရောက်ရင် တစ်နိုင်ငံလုံး မီးလင်းအောင် ဆောင်ရွက် သွားမယ်ဖို့အတွက် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅.၈ ဘီလီယံ လိုအပ်ကြောင်း အဲ့ဒီအတွက် ကမ္ဘာ့ဘဏ်က ချေးငှားမှာဖြစ် ပြီး လက်ရှိမှာ လေ့လာမှုပြုလုပ်ထားပြီဖြစ်ကြောင်း အမျိုးသားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားရရှိရေး စီမံကိန်းမန်နေဂျာ ဦးသူရအောင်ဘို က ပြောပါတယ်။
ဒီကနေ့ လျှပ်စစ်နဲ့ စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနမှာ အမျိုးသားအဆင့် လျှပ်စစ်မီးရရှိရေး စီမံကိန်းအကြောင်းကို ဦးသူရအောင်ဘို က ရှင်းပြရာမှာ ပထမ ၅ နှစ် စီမံကိန်းအကြောင်း အခုလို ပြောပါတယ်။
"ပထမငါးနှစ်စီမံကိန်း ပြီးတဲ့အခါမှာ ကျနော်တို့ ခန့်မှန်းချက်ကတော့ အိမ်ထောင်စုပေါင်း ၁.၇ သန်းလောက် မီးရမယ်လို့ ခန့်မှန်းပါတယ်၊ ပထမငါးနှစ် စီမံကိန်းထဲကမှ ပထမဦးဆုံးလုပ်မယ့် ဓါတ်အားစနစ် နှစ်မိုင် အတွင်း ကျေးရွာတွေ ပြီးရင်ရွာပေါင်း ၅၀၈၀ မီးရမယ်လို့ ခန့်မှန်းပါတယ်၊ ရွာပေါင်း ၅၀၈၀ ကို ပထမဦး ဆုံး ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပြီး ဆောင်ရွက်တဲ့ ရည်မှန်းချက်ကတော့ ၂၀၁၆-၁၇၊ ၂ဝ၁၇-၁၈ ဘတ်ဂျက် ၂ နှစ် ပြီးစီးအောင်ဆောင်ရွက်ဖို့ လျာထားပါတယ်"
မြန်မာနိုင်ငံမှာ အိမ်ထောင်စုပေါင်း ၁၁ သန်းနီးပါးရှိပြီး အဲ့ဒီအထဲက အိမ်ထောင်စု ၄ သန်းနီးပါးသာ လက်ရှိမှာ လျှပ်စစ်မီးရရှိကြောင်းနဲ့ ကျန်တဲ့ အိမ်ထောင်စုပေါင်း ၇ သန်းကျော် မီးရဖို့အတွက် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅.၈ ဘီလီယံ လိုအပ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီလိုအပ်ချက် ငွေပမာဏဟာ ဖြန့်ဖြူးရေးအပိုင်းအတွက်သာရှိသေးပြီး ကျန်တဲ့လျှပ်စစ်မီး အတွက် ဓါတ်အားထုတ်လုပ်မှုအပိုင်း မပါသေးဘူးလို့လည်း ဦးသူရအောင်ဘို က ပြောပါတယ်။
၂၀၁၅ခုနှစ်က ကမ္ဘာ့ဘဏ်က အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၄၀၀ ချေးပေးထားပြီး စာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးထားပြီးဖြစ် ပါတယ်။ အမျိုးသားလျှပ်စစ်ရရှိရေးဌာနက ဒေါ်လာ သန်း ၃၁၀ ချေးယူတာဖြစ်ပြီး ဒေါ်လာ သန်း ၉၀ ကို ကျေးလက် ဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနက ချေးယူတာလို့ ဆိုပါတယ်။
နေရပ်- San Diego
something really wrong in this picture!!!!
Takealook it carefully, what do you notice?
you see the guy working on the top?
A sweater,alongi, and possiblyaslipper?
But what was wrong with it? what is wrong with wearing those?..
Off course, they probably cut the Power off before they work on it..
In my language, I call it De-energized,.,.,
But but but....What do you see...
Let me tell you what?
The very first thing came in to my mind is SAFETY!!!!
Yeap...Always safety first...
The very first one is.... He is working on the top about 8 feet high...
No ladder. No safety harness to tie himself up just in case if he fall...
off course, they do look like they had one safety observer...
but where was the safety observer standing...
what if the guy fall, would he able to catch him?
I say definitely no...
I don't have to say and makealist what's goanna happen if he fall, because you already know..... let me tell you anyway, > broken bone, spinal injury, head injury,etc,.. anything you can think off...
is that the only thing?...
I say what?....As far as I can say the one they are working on is usually more than 440 volts if its energized(if there is power)..
Asamatter of fact?...How many volts, how strong the current can actually can killed you?..
here,aminimum of 30 volts can actually kill you..
and if you want to say how strong the current...its 0.01 amps....
yeap...the outlet(receptacles) you usually use it at home is around 120volts...
am I right?...yeap...
But why is that so small volts and current isaproblem for you?
All alternating current actually goes on Frequency....
What is that mean to you?...
Let me tell you what?...
when you get shock by electric(especially Alternating Current) AC, but you don't getascratch from it. And you like to say, "Oh I'm fine, I'm totally fine"...
I say what, you are not fine at all...
Your heart is so important right...
How is your heart actually work...It work on its own heart beat right?
Didn't I mentioned earlier about the Frequency?
Yeap..Your heart beat is actually measured inaFrequency...
When you getashock, it goes into the most important part of your body which is your heart..
Since your heart beat running with its own frequency...It is going to mess the Frequency(your heart beat) on your heart slowly...
what is your heart beat actually function your body..
It pumps and carry your blood right?
The next thing you know you body is not going to send enough blood in your brain....
What happen when your brain doesn't have enough blood...
I don't want to say happen next ...you already know...
lets go back to the picture....
If I'mamanager working in that area...I won't let people work without safety protective gear...especially rubber gloves, rubber matt, rubber boot..
And the most important, have another guy witharope just to pull the actual worker inacase if he get shock....
Sorry too long to read already.....I'll stop it here...you named it and you called ...
May 20, 2016 04:44 PM
That is too great to hear for everyone to get electricity. But you know what is so wrong in the Picture?
Yeap, something is really going with the people working in there in the picture..
I do personally want to fire the Manager...
* I do not see the worker wearing Personal Protective Equipment(PPE) in the picture...
It is very wrong. Everytime if you are about to work on electrical equipment, the very first thing everyone must make sure is SAFETY...
I don't see the working environment is safe at all...
I don't see none of them are wearing Rubber gloves, rubber matt, safety observer, current resistance suit, etc...
Guys, only if you care...
I say what I do care...I do care about the working environment...
Anybody want to discuss...
Oh My GOD.....!!!! 2030?
May 19, 2016 08:20 PM
၂၀၃၀ .. ?? ဟတ်လား ။
Typing error (or) အပြောမှားတာ မဟုတ်ပါဘူး နော်။
နောက် (၁၄ နှစ်) ဆိုတာ ဘာမဆို ဖြစ်နိုင်သလို ၊ ဘာမဆို မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ မရေရာတဲ့ အနာဂတ်နဲ့
" လုပ်စား " နေတာ ရပ်ဖို့သင့်ပါပြီ။
May 19, 2016 01:59 PM
စဉ်းစားနော်စဉ်းစား
လူနှစ်ယောက် သံတန်းပေါ်မှာ ။
ခု ချက်ချင်း လျှပ်စစ်လာရင် သူတို့ သေသွားမှာပေါ့။